South China Sea « MMWeather Information BLOG
လာမည့် ၆ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိ
By mmweather.ygn, on September 26th, 2013%
စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၄း၃ဝ နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄.၇ ဒီဂရီ နှင့် ၁၆.၂ ဒီဂရီ အကြား၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၁၁၈.၁ ဒီဂရီနှင့် ၁၁၃.၆ ဒီဂရီကြား တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတွင် လာမည့် ၆ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း JTWC မှ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။(ပုံ-၁)
FORMATION OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE IS POSSIBLE WITHIN 110 NM EITHER SIDE OF A LINE FROM 14.7N 118.1E TO 16.2N 113.6E WITHIN THE NEXT . . . → Read More: လာမည့် ၆ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိ
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ 93W, South China Sea, တောင်တရုတ်ပင်လယ် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W စတင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on September 24th, 2013%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်း၊ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၅ဝဝ ခန့်၊ တရုတ်(ပြည်မ) Guangdong ပြည်နယ်- ဟောင်ကောင်မြို့တောင်ဘက် မိုင် ၃၂ဝ ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၄၁၅ မိင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST-93W စတင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပါသည်။
INVEST-93W သည် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၈ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ ရောက်နိုင်ခြေ နည်းပါးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။(ပုံ)
INVEST-93W 24 Sep 2013 0600Z Location: 17.9 115.7 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa
. . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W စတင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W, South China Sea, တောင်တရုတ်ပင်လယ် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 12W နှင့် 13W တို့ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 11W, 12W, 13W, East Phillipines Sea, EAST-CHINA-SEA, South China Sea, UTOR, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် UTOR-11W ကုန်းတွင်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် တရုတ်-Hunan ပြည်နယ်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် ပျက်ပြယ်သွားတော့မည်
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 11W, 98W, LABUYO, South China Sea, UTOR, လေဖိအားနည်းဆဲလ် - LPC တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOR အင်အားလျော့ကျပြီး တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား တစ်နာရီ 9knots နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 11W, LANDFALL, South China Sea, TYPHOON, UTOR သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နောက်ပိုင်း မုတ်သုန်လေအားကောင်းပြီး အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်တွင် အားကောင်းသည့်မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်မည်
Leaveacomment ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် 11W, South China Sea, UTOR, ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် မုန်တိုင်း UTOR-11W တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တော့မည်
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းသတင်း 11W, LABUYO, South China Sea, TYPHOON, UTOR တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းဖြတ်သန်းပြီးနောက် မကာအိုအနီးမှ ကုန်းတွင်းဝင်ရောက်မည့် တိုင်ဖွန်း UTOR-11W
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းသတင်း 11W, LABUYO, South China Sea, super typhoon, TYPHOON, UTOR UTOR အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်ဖြင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 11W, LABUYO, South China Sea, super typhoon, TYPHOON, UTOR အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOL ဖိလစ်ပိုင်သို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည်
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းသတင်း 11W, 97W, LANDFALL, Phillipine Sea, South China Sea, TYPHOON, UTOL Older Entries »